Taasi waa sax Byte, samee fiidiyowyo yar yar sida Tik Tok | Androidsis
Haddii aan haysano abuuraha geedka canabka ah, adeeggaas fiidiyowyada yaryar ee yar yar in lahaa daqiiqad uu ammaan, tan Shabakad bulsho oo cusub oo loo yaqaan Byte iyo inuu u yimaado inuu si toos ah ula tartamo Tik Tok, runtu waxay tahay inuu qaato waqtigiisa, maadaama uu leeyahay wax u gaar ah.
Haddii Tik Tok leeyahay wuxuu helay farqi weyn oo u dhexeeya jiilal kala duwanRuntu waxay tahay sababta aynaan u heli doonin adeeg kale oo isku dayaya inuu cagahaaga joojiyo si aadan u helin keega oo dhan taas oo macnaheedu yahay inaad duubto muuqaal gaaban si aad dadka kale ula wadaagto, isla markaana aad aragto kaaga.
1 Byte for Mini ilbiriqsi Video clips
2 Si uu Tik Tok ula dagaallamo alaabtiisa
3 15 ilbiriqsi oo muuqaal ah si loo duubo
Byte for Mini ilbiriqsi Video clips
Bixinta Byte waa in ka badan oo xiiso leh tan iyo markii ay ka timid abuuraha ee Vine iyo in ay hore u leedahay waayo-aragnimadeeda ah noqoshada goob muuqaal ah oo apps ah. Vine waxa ay lahayd waqti caan ah dhawr sano ka hor iyada oo soo saartay waayo-aragnimo weyn oo lagu daawado lana wadaago fiidiyowyada gaagaaban. Xaqiiqdu waxay tahay in markii dambe uu ku khalkhaliyay Twitter iyo Periscope, inuu ku dhawaad ​​​​la waayo oo uusan wax badan ka ogaan iyada.
Hadda abuuraheeda ayaa raba inuu safka hore ugu soo laabto adeeg la yiraahdo Byte inuu noqdo Tallaabooyinka ugu horreeya ee runta ah waxay u egtahay mid aad u wanaagsan, waxayna helaysaa xoogaa dib u eegis togan.
Byte waxaa lagu gartaa in la arki karo mini video clips kuwa kale iyada oo loo marayo channels kala duwan iyo qaybaha. Sida aan u abuuri karno anaga si aan u soo jiidano dareenka oo aan u noqono kuwa saameeya dhowr bilood gudahood. Waa hubaal in haddii aan ka faa'iidaysanno fursadda oo aan joogto ahayn, mar kasta oo aan jeclaanno, waxaan noqon karnaa mid ka mid ah magacyada muhiimka ah ee adeeggan ama madal.
Si uu Tik Tok ula dagaallamo alaabtiisa
Byte inta badan waxay ku salaysan tahay app kaas oo aanu guri ku leenahay halkaas oo fiidiyowyada yaryar ee ugu shidan ee maalinta ugu dambeeya ay ka muuqdaan waqtiga, sida ku dhici karta shabakadaha kale ee bulshada.
Si kale haddii loo dhigo, xagga hoose waxaan leenahay bar ugu weyn halkaas oo ay noo ogolaato inaan galno shanta qaybood ee ugu muhiimsan. Waxaan leenahay guriga lagu sheegay oo leh wakhtiga hadda; ah raadinta taas oo noo ogolaanaysa inaan galno qaybaha ugu muhiimsan ee Byte sida Spotlight, New & Trending, Popular Now, Comedy iyo kuwo kale oo badan; badhanka dhexe ee qalabku waa in la duubo fiidiyoow yar; qaybta kale waa waqtiga kuwa aan raacno; iyo ugu dambeyntii waxaan leenahay profile shakhsi.
Haa mid kasta mid ka mid ah fiidiyowyadaas ayaa ikhtiyaar u leh inuu qoro comment iyo like. Waa qaabka is dhexgalka iyo habka looga soo bixi karo sida ay u dhacdo shabakadaha kale ee bulshada.
15 ilbiriqsi oo muuqaal ah si loo duubo
Haddii aad rabto inaad hadda ka mid noqoto bulshada Byte waxaad tagi kartaa duubista fiidiyowyadaada oo ku muuji hal-abuurkaaga abka runtii si aad u wanaagsan loo qaabeeyey oo keenaya waayo-aragnimo weyn. Naqshadeynta interface waa in la soo bandhigo inkasta oo aan ku jirno noocyadii ugu horreeyay, taas oo macnaheedu yahay in ay jiraan qaar ka mid ah cayayaanka, appku wuxuu si fiican u qabtaa iyada oo aan qaladaad weyn lahayn.
Hadda waa taas Isticmaalayaal badan ayaa ku biira khibrada oo bilow duubista fiidiyowyadaada 15-ilbiriqsi oo sidaas kor u qaad bandhigga. Xaqiiqdu waxay tahay in ay leedahay wax walba si ay u noqoto tartan dhab ah oo ka dhan ah Tik Tok oo ay yimaadaan, waayo-aragnimadooda, waxay hubaal ahaan u ogaan doonaan sida loo cusbooneysiiyo si loo hagaajiyo khibradda oo ay ku daraan shaqooyinkaas dhibcaha ku dara.
Byte waxaad ka haysataa bilaash Google Play Store iyo in versions ugu horeysay waxay mar hore u muuqataa weyn. Hadda waxaad u baahan tahay soo-saareyaal gaar ah oo hal-abuur leh oo soo bandhigaya noloshooda ama doonaya inaad la wadaagto waqtiyada majaajillada. Byte wuu u furan yahay waxaas oo dhan wuxuuna noqonayaa mid ka mid ah apps iyo shabakadaha la raaco bilaha soo socda.
Isku dhaca: Ku xidh halabuurayaasha
Developer: Isku dhaca App, Inc.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Waxaan tijaabinay Byte, shabakad cusub oo bulsheed oo leh fiidiyowyo yar yar oo abuuraha Vine ah si loola tartamo Tik Tok
Hadda markale waad ciyaari kartaa SNOW BROS weyn. classic ka moobilkaaga